> Resource> Windows> Windows gaghị amalite elu, ọ bụghị Ọbụna Nchekwa na ọnọdụ
Mgbe Windows gaghị amalite elu, ọ bụghị ọbụna Nchekwa na ọnọdụ
Ọ ga-abụ a na-emenye ụjọ ụbọchị mgbe ị pịa Malite bọtịnụ na kọmputa gị na ọ na-egosi na ị na ihe ọ bụla, ọbụna nweta ya na Nchekwa na ọnọdụ. E nwere ọtụtụ ihe mere gị Windows agaghị buut, ma ole na ole clues ka ị mara ihe nsogbu nwere ike ịbụ. Ị pụghị buut gị Windows ma na-enweghị ozi site na ya, nke mere na i nwere ike na-ekwu "Ọ dịghị ihe na-arụ ọrụ" kọwaa gị nke.
Ọ bụ n'ezie ihe jọkariri njọ, ma ọ bụghị ihe kasị njọ. Dị ka ogologo oge gị na kọmputa bụ n'ụzọ anụ ahụ na-emebibeghị, ị nwere ike idozi ọ bụla software mbipụta na ya. Ọ bụrụ na e nweghị ihe ọ bụ ihe dị mkpa, i nwere ike reinstall usoro, nke nwere ike ịbụ a ngwa ngwa ụzọ idozi ọ bụla software nsogbu. Ị na-adịghị mkpa-ada mbà n'obi mgbe e nwere mkpa data echekwara, ma ọ bụ ị na-adịghị a Windows disk. Ime a bootable CD ma ọ bụ USB mbanye n'ihi na gị Windows bụghị dị ka ike dị ka ị na-eche. Nnọọ na-eso nzọụkwụ n'okpuru iji dozie nsogbu gị mfe.
3 nzọụkwụ iji nweta gị Windows na-agaghị buut
Nke mbụ niile, na-a nnapụta CD / USB ebe a: Wondershare LiveBoot buut CD / USB, oké omume na pụrụ inyere gị aka iji nweta gị Windows, chọta na idozi gị Windows nsogbu na ole na ole clicks.
Mgbe ịzụta a software, ị ga-enweta a download njikọ na a akwụkwọ ikike site n'aka Wondershare. Download na wụnye ya na a na-arụ ọrụ na kọmputa, na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Step1. Ka gị onwe gị bootable CD / USB mbanye
Na-agba ọsọ Wondershare LiveBoot na kọmputa mgbe wụnye ya, na a window n'okpuru ga-emere. Ị nwere ike ịhọrọ ike a bootable CD ma ọ bụ a bootable USB mbanye site na isoro ndu egosipụta. Ihe niile ị chọrọ ime na-inserting ide CD ma ọ bụ USB mbanye n'ime kọmputa na pịa apa ọkụ bọtịnụ. Mgbe ahụ wepụ nke disk na-akpali ndị nzọụkwụ ọzọ.
Step2. Malite Windows na bootable CD / USB
Ugbu a na-atụgharị kọmputa gị onye Windows agaghị buut. Fanye àjà-nsure CD ma ọ bụ USB na kọmputa, na Malitegharịa ekwentị ya. Mgbe usoro amalite Ibu Ibu, pịa F12 button, na a buut Ngwaọrụ NchNhr ga-apụta. Họrọ "onboard ma ọ bụ USB CD-ROM Drive", na ị ga-n'ihu a window dị ka ndị na. Họrọ mbụ nhọrọ: buut si LiveBoot. Ugbu a ị na-ịnweta gị na kọmputa.
Step3. Idozi gị "Windows gaghị amalite elu" nke
Mgbe Wondershare LiveBoot 2012-egosi, gaa na "Windows Iweghachite" nhọrọ, na-ahọrọ "Loading Crash Ngwọta" na n'aka ekpe nke window. Ebe i nwere ike na-agụ syptom na ị encoutered mgbe malitere na kọmputa gị. Dị ka ya, e nwere na-akpata na-eme ka gị Windows buut odida na ngwọta na-dị iche iche na-akpata. I nwere ike ịgbalị ihe ngwọta otu otu untill ị nwere ike idozi gị Windows nke ọma.
All mkpa ka ị mara banyere Microsoft Edge Nchọgharị on Windows 10